By सपनासंसार July 28, 2012
लेवाँसको जीउझैँ कम्जोर कम्जोर,
थकाईले संगै -
यता उता जता लप्काएपनि लप्किने -
पिउँदा बिग्रेको जाँडझैँ टर्रो ;
तान्दा निम्पत्ताको झोल भन्दा तितो;
खाँदा लप्सीझैँ अमिलो;
मसंग परिभाषा नसोध प्रिय -
तिम्रो पो पर्यो फूल जस्तो;
मोई पारेपछिको नौनी घ्यू जस्तो
च्यूरा-मासु खाँदा लागेको ढुङ्गो जस्तो !! कहिले महँगो
कहिले अत्ति सस्तो सस्तो
खै कस्तो कस्तो !!!
Unknown 3/23/15, 2:21 AM